शब्दक्षेत्र: April 2015
संसारलाई साढे पाँच फन्कोमा एक फन्को ।
पुष्कर शाह मास्टर बन्ने सपना बोकेको एउटा पात्र थियो तर कसरी यस्तो यायावर बनेर निस्किए ?
उनी त्यस्तो यात्रामा निस्किए जसले उनलाई संसार मात्र घुमाएन यो पृथ्वी नामको कुनाहरुमा भएका भव्यता र साँघुरोपनाका यथार्थहरुलाई चिन्न सहयोग पु¥यायो । उनले आफ्ना भ्रमणका दैनिकीहरुलाई पुस्तकाकार रुप दिने प्रयत्न गरे र त्यसमा साथ लागे भुपेन्द्र खड्का र बुकहिल ,यी सम्पूर्ण पाठकीय हिसाबमा धन्यवादका पात्र हुन् ।
जब उनी यात्रामा निस्किन चाहन्थे , उनीसँग अगाडि सहज बाटो थिएन । आमाले पत्याइनन् । साथीहरुले गफ दियो सोचे । कतिले पुष्कर ठिक दिमागमा रहेन सम्म भन्न भ्याए । उनमा आमालाई मनाउने प्रकृया पुरा भएका बखत् पूर्ण साहस भरियो ,अब यो संसारलाई साइकलको भरमा पनि जिती दिन सक्छु ।
उनले उत्तर दिए –‘ मसँग साइकल बाहेक अर्को विकल्प नै थिएन । मसँग कहाँ त्यत्ति पैसा हुनसक्थ्यो र संसार घुम्न ? सबभन्दा कम खर्चिलो यही हुन सक्थ्यो , त्यसैले यो रोजेँ । ’त्यतिखेर मैले उक्त पुस्तक पढेको थिइनँ । पछि पढेँ , पुस्तकमा पनि उही स्विकारोक्ती देखेँ । उनले पैसाले संसार घुमेका होइनन् , आत्मसाहसले घुमेका हुन् । उनले विश्वका १५० देशहरु घुमे । यो बीचमा उनले धेरै सुखद् अनुभूतिहरु सँगाले । साथमा दुखद् पनि । चाइनाको कुनै होटलबाट त्यहाँका सुरक्षाकर्मीका कारण राति नै होटल छाडी भाग्नुपरेको प्रसङ्ग । मेक्सिको , बार्बाडोज, न्युयोर्क लगायतका ठाउँमा लुटिँदाको प्रसङ्ग दर्दनाक छन् । यो विश्वको सबैभन्दा बढी धनाढ्य भनिने देश अमेरिकाको न्युयोर्कमा उनलाई कसैले दश डलरको लागि कन्चटमा पेस्तोल तेस्र्याउँछ । यो अपत्यरिलो घटनाजस्तो पनि लाग्छ तर यो साँचो हो भन्ने पुष्टि मलाई अर्को अमेरिका नै बस्ने एक साथिले पनि पुष्टि गरिदिएका छन् । उनी पनि त्यहाँ लुटिएको प्रसङ्ग सुनेको छु त्यो पनि यस्तै सानो रकमकै लागि । यहाँ त पेस्तोलको कुरा आयो तर छुरी देखाएर बढी लुट्ने गरेको अनुभव सुन्न पाइन्छ र त्यस्तोमा बढी गाँजाको नशा लिने व्यक्तिहरु सक्रिय हुने गरेको बताइन्छ ।
अङग्रेजी भाषालाई अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भनिन्छ किनकी यो भाषा बढीले बुझ्छन् । तर त्यो भन्दा महत्वपूर्ण भाषा इसाराको रहेको पुष्कर बताउँछन् । अङ्ग्रेजी नबुझ्ने अवस्थामा पनि यो सहज हुने उनी बताउँछन् । त्यसमै पनि फरक ठाउँका फरक रहनसहन ,चालचलन र जीवनपद्धतिले समस्या ल्याउने उनको अनुभव छ । चिनमा खाना खाने तरिका देखाउँदा चोरी औला र माझी औँलाको प्रयोग गरी मुखतिर लगेर देखाइने तर कहीँ त्यसैलाई धुमपानको सङ्केतका ंरुपमा बुझिदिने , त्यस्तै सुत्नको लागि सङ्केत गर्दा टेलिफोन गर्न खोजेको सङ्केतका रुपमा बुझ्ने समस्याहरु देखिने उनको अनुभव छ । पुस्तकका धेरै सकारात्मक पक्षहरु छन् । अध्ययनमा एक रसमात्र प्राप्त हुँदैन । छोटा छोटा उपशीर्षकमा रहेका र हास्यात्मक तथा कहीँ अलिक रहस्यात्मक शैलीले प्रस्तुत गरिएकाले पुस्तकले तानिरहन्छ । साथमा विश्वलाई यस पुस्तकका माध्यमले चिन्न सहज बनाउँछ । विश्व परिदृश्यका धेरै पक्षहरुको जानकारी मिल्छ । त्यहाँको विकास अवस्थिति , प्राकृतिक सौन्दर्य , खानपान र संस्कृतिका झिल्काहरु देखा पर्दछन् ।
Posted by subas at 9:00 AM Links to this post
तस्वीर खिच पत्रकार
हाम्रा आँखाहरुबाट पत्थरका ढिक्काहरु खस्लान्
तिम्रा बिकाउका सामान बन्नेछन्
सिंहदरबार मौन सङ्गीत सुसेलिरहेछ –
......तिम्रा आदिम सपनाहरुमा डढेलो लगाऊ .....
तिमी केही हिन्दी गीत सङ्गीत
र पार्टी प्रवक्ताको भद्दा अन्तर्वार्ता बजाऊ
तिमी फिल्मी काउन्टडाउन र पप भिडियोहरु बजाउँदै बस
तिमी चिप्लो स्वरमा
कुनै दिवङ्गत प्रधानमन्त्रीको जीवनगाथा प्रस्तुत गर
भन्दै बस –
उहाँ देशका प्रधानमन्त्री ,तिमीहरु जाबो नागरिक
उहाँ सिङ्गो नेपाल, तिमीहरु नाथे जाजरकोट
तिमी चिया गिलासमा देशको संविधान बनाऊ
बेलुका दारु महलमा पसिना पुछ : डा. केसीको दिमाग ठीक छैन
केही मिति गुज्रिएको औषधी पठाऊ
कसले पढ्लान् र चिप्लेकीरा जस्ता अक्षरहरु ?
यो महामारी सिंहदरबार ,
संसदभवन वा राष्ट्रपति कक्षमा
र नतर्साउन् प्रेतहरुले सपनामा
हाम्रै जीवनसँग अभ्यस्त छौँ
बरु तिम्रा दैनिकीहरुलाई बाधा पुग्ला
तिमी आफ्नै बारे सोच ।
Posted by subas at 7:55 AM Links to this post
मकवानपुरको छतिवनमा जन्मेका सुवास खनाल युवा पुस्तामा रुचाइएका कवि हुन् । हेटौंडावासी कवि खनाल शिक्षण पेशामा संलग्न छन् । ‘विचारको उल्टो नदी’ उनको केही महिना अघि छापिएको पहिलो कविता कृति हो । यसपटक ‘विचारको उल्टो नदी’बाट ‘कलेज एक यातना–शिविर’ कविता पाठक माझ प्रस्तुत छ । सं
- सुवास खनाल /
कलेजको भित्ता भरिभरि
यातना–शिविर लेख्नुको रहर छ
म कलेज अध्ययन खप्न गइरहेछु
र बाँड्छ स्लिपिङ ट्याबलेट
पेसाप्रति घृणा सिक्न
“नपढेर हली बन्छौै ?”
“पढ्दैनौ भने गोठालो बन्छौ ?”
“सिपाही बन्नु हो तिम्रो उद्देश्य ?”
“राजनीति, यो हो यौन दुव्र्यसन”
“खेलाडी बन्ने हो भने किन आउनु कलेज ?”
“यो पढाउने काम झन् ठिक छैन”
प्यारा गुरुहरु !
मलाई हली बन्न सिकाइदेऊ !
मलाई गोठालो बन्न सिकाइदेऊ !
मलाई सिपाही बन्न सिकाइदेऊ !
मलाई राजनीति गर्न सिकाइदेऊ !
मलाई खेलाडी बन्न सिकाइदेऊ !
मलाई अध्यापन गर्न सिकाइदेऊ !
प्रेम जगाइदेऊ !
Posted by subas at 9:14 AM Links to this post